Filomena na snowfall na Spain 2021: ihe kpatara ya na nsonaazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Filomena na snowfall na Spain 2021
Oké ifufe a kụrụ Spain Philomena na ebupute ya site na ikuku ikuku site na ndida ma na o zutela oyi oyi oyi nke esipuru na arctic. Esemokwu nke igwe ikuku emeela snowfall akụkọ ihe mere eme na mpaghara Iberia.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile na nchịkọta gbasara amụma, ihe kpatara na nsonaazụ nke oke mmiri ozuzo Filomena.
1 Amụma nke oké ifufe Filomena
2 Snowfall na ntu oyi
3 Ihe kpatara oke ifufe Filomena
4 Mgbanwe ihu igwe
Amụma nke oké ifufe Filomena
Satellites nke meteorological amaalarịrị mmegharị nke igwe mmadụ nke sitere na ndịda na site na ugwu. Mgbe nnukwu ikuku nke oyi na oyi na-ezukọ na ikuku na-ekpo ọkụ, a na-ebute oké ifufe site na ọdịiche dị n'etiti nrụgide. Mbelata nke nrụgide emeela nnukwu snowfall n'akụkụ mmiri niile. The snow dara na ebe a dị nnọọ ala elu ebe ọ na-ejikari dịghị ndị dị otú ahụ ọdịda. Site ugbu a gaa n'ihu enwere kwa ụbọchị ụfọdụ na-abịa n'ihu polar ọhụrụ na obere okpomọkụ na-eme ka snow kpọnwụrụ ma na-adịru ụbọchị.
Anyị enweela n'oge ngwụcha izu ụka snow dara ka nke a na-ahụtụbeghị mbụ na Spain. Snow kwuru ha abịa igbochi obodo Madrid na isi obodo mpaghara ndị ọzọ na-ahapụ blanket igwe oyi nke kpuchiela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ala ahụ dum. Typedị oke ifufe a emeela ọnọdụ mberede n'ihi enweghị agagharị na obodo ndị mepere emepe. Amụma nke Mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na State gosiri na e nwere ọtụtụ ọnọdụ ndị mere ka oké ifufe Philomena ghọọ oké mmiri ozuzo zuru oke.
Snowfall na ntu oyi
Eburu oke mmiri ozuzo nke ndịda na mmiri ozuzo nke merela ụbọchị ole na ole ma nyefee oge ebe ihu igwe doro anya ma nwee oke okpomọkụ, ọ bụghị mmetụta na-eme ka mmiri ozuzo na-akwụsị, kama, ọ bụ ihe na - emeghị ajọ ifufe ahụ. Ọnọdụ ikuku a nke zuru oke jikọtara ya na oke mmiri ozuzo Filomena iji nwee ike ịgbanwe Spain na a snowy ebe maka oge. N'ihi ọnọdụ ikuku ndị a ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-enwe ọnọdụ ndị dị mkpa ka snow wee nwee ike ijide ruo ụbọchị.
Mgbe snow na-adịghị ahụkebe mere na njedebe nke afọ gara aga, ebili mmiri abịawo nke gosipụtara ogo dị n'okpuru ogo 10 n'ọtụtụ ebe. Na Madrid ọnọdụ okpomọkụ nke -10 degrees eruola. A hụbeghị ụkpụrụ ndị a kemgbe Jenụwarị 16, 1945 mgbe ọnọdụ okpomọkụ ruru -11 degrees. Oké oyi abalị na oyi na-atụ ehihie ehihie akwadola ịnọgidesi ike nke snow na akpụrụ mmiri n'ọtụtụ ebe n'ime izu.
Ma enwere ọtụtụ ihe ndị mere ka snow na-adịgide n'ime izu. Ka anyị lee ihe ihe ndị a bụ:
Antyclone na-adọga osimiri nke ugwu dị n'ebe ugwu gaa na peninshula. Nke a anticyclone bụ ọrụ maka ịhapụ igwe doro anya, ifufe fọrọ nke nta ka ọ belata kpamkpam na gburugburu ebe oyi na-agba agba na okpomọkụ na-eru ogo 0.
Ogologo oge nke abalị abalị. Dị ka anyị si mara, abalị abalị na-adịkarị ogologo oge karịa oge ọkọchị ma ọ na-aka enwekarị obere okpomọkụ maka ogologo oge n'ihi enweghị ụzarị anyanwụ. Ndị a ala okpomọkụ ala ka mma na ike siri.
Freshly dara ada gosipụtara anyanwụ. N'ihi eziokwu ahụ bụ na snow na-enwe ike igosipụta ìhè anyanwụ, ọ na-egbochi ala ka ọ kpoo ọkụ ngwa ngwa ma na-eme ka mmetụta a maara dị ka mmetụta friji. N'ihi nke a, a ga-enwe mmetụta nke snowfall nke oke mmiri ozuzo Filomena wetara ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ etiti ma ọ bụ njedebe nke Jenụwarị.
Ihe kpatara oke ifufe Filomena
Ka anyị hụ ihe kpatara nnukwu snowfalls a. Anyi aghaghi ima na oke mmiri ozuzo a abughi nani ihe kpatara ya, ihe obughi nani. Filomena abụrụla oke ifufe dị na Ọwara Osimiri Cádiz nke mere ka ikuku dị jụụ na-asọba na peninshula. Ọ bụ n’ihu nke na-ebute ụdị mmiri ozuzo dị iche iche na ndịda na ọwụwa anyanwụ ya. Enwere ike ịhụ nke kachasị na nnukwu mmiri ozuzo na Malaga ebe osimiri tojuru ma mee ka ọtụtụ mmadụ nwụọ.
Ihe mere n'oge a bụ Filomena dọtara iru mmiri site na ndịda yana anticyclone si Atlantic na United Kingdom nke nọ na-agbanye ikuku oyi n'akụkụ mba anyị otu izu. Mgbe oke ikuku oyi na-ahụ ala ala dị ala n'okporo ụzọ ya, o meela ka mmiri ozuzo nke oke ifufe buru buru snow. Otu n’ime ajụjụ ndị ọkachamara n’ihe banyere oke igwe na-ebute bụ ma ọ bụrụ na ihe ndị a niile metụtara mgbanwe ihu igwe. Ọtụtụ na-eche ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ oyi a ma ọ bụrụ na ụwa na-ekpokwu ọkụ.
Have ga-aghọta na mgbanwe ihu igwe dị mgbagwoju anya. Agbanyeghị na ọnọdụ a bụ ịmụba ogo ogo ụwa niile, ihu igwe anaghị azaghachi n'ụdị usoro. Nke ahụ bụ, ihe na-adịte aka na nnukwu mpaghara ala mgbe ọnọdụ okpomọkụ ga-arị elu. Anyị maara na ikuku ụwa na-ekpo ọkụ na ọ bụ eziokwu sayensị ka akwadoro. Ihe ndị a niile na-ewebata ike karịa na sistemụ dị ike ma nwekwaa ike zuru oke emeela ka ọnọdụ a na-atụghị anya ya wee nwekwuo ikike ime ka mmetụta mpaghara dị ike.
N'otu oge ahụ, ka okpomọkụ ụwa zuru ụwa ọnụ na-ebili, a gbanwere ihe a na-akpọ polar jet. Ọ bụ ikuku dị ugbu a na-apụta na stratosphere na nke na-enyere aka kewaa mpaghara polar na ndị dị nwayọọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe mgbochi a na-agbanwe na anyị ga-ahụ ụfọdụ ịmachi nke igwe ikuku arctic na mpaghara ala nke Iberian Peninsula.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke mmiri ozuzo Filomena na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Filomena na snowfall na Spain 2021